AHOANA NY FAMOAHANA NY RESADRESAKA AMIN'NY SKYPE - SKYPE - 2019
Ny fametrahana mpamily iray ho an'ny karatra video dia tsy sarotra satria mety ho toa mijery voalohany fotsiny. Na izany aza, mba hahatakarana ny endriny rehetra amin'ny fametrahana rindrambaiko manokana ho an'ny lahatsary AMD Radeon HD 7600G dia mbola mendrika izany.
Fametrahana ny mpamily ho an'ny AMD Radeon HD 7600G
Ny mpampiasa dia nomena safidy maro ny fomba ankehitriny hametrahana ilay mpamily ho an'ilay karatra video misy fanontaniana.
Fomba 1: Tranonkala Ofisialy
Ny ankamaroany matetika dia ny mahita ny rindrambaiko izay takiana amin'ny fitaovana manokana.
Mandehana any amin'ny loharano ofisialy amin'ny orinasa AMD.
Hitady fizarana "Drivers and Support". Izy io dia eo an-tampon'ilay toerana. Manaova tsindry iray.
Avy eo, tandremo ny endriny, izay eo ankavanana. Mba hampiasana azy io hamandrihana rindrambaiko dia tsy maintsy ampidirinao ao amin'ny karatra video daholo ny angona. Tsara ny maka ny fampahalalana rehetra amin'ny pikantsary etsy ambany, raha tsy hoe ny dikan-teny amin'ny rafitra miasa.
Aorian'io isika dia omena antsika mba hisintona ilay mpamily ary hametraka izany amin'ny programa manokana.
Ny famaritana an-tsipirihany momba ny hetsika hafa dia azo jerena ao amin'ny vohikalantsika amin'ny rohy etsy ambany.
Vakio bebe kokoa: Mametraka mpamily amin'ny AMD Radeon Software Crimson
Ity fikarohana ity dia efa tapitra.
Fomba 2: Fitaovana ofisialy
Mpanjifa maro no mamorona sehatra manokana izay manadihady ny rafitra sy mamaritra izay karatra grafika napetraka, ary maka rindrambaiko izay manan-danja amin'ny toe-javatra manokana.
Raha te haka ilay utility ianao, dia tsy maintsy manatanteraka ny hevitra roa voalohany amin'ny fomba voalohany.
Misy fizarana miseho "Famaritana automatique ary fametrahana ny mpamily". Ao ambadik'io anarana mavomavo io dia ny fampiharana ny fitadiavana. mpanao gazety "Download".
Misy ny rakitra Exe iray. Manaova azy.
Voalohany indrindra, ny singa ao amin'ny programa dia tsy entina. Noho izany, manondro ny fomba ho azy ireo isika. Ny tsara indrindra dia ny handao ilay iray izay natolotra teo aloha.
Aorian'izany dia manomboka ny dingana. Tsy maharitra ela izany, miandrasa fotsiny amin'ny farany.
Ny hany zavatra izay manasaraka antsika tsy hijery ny rafitra dia ny fifanekena momba ny fahazoan-dàlana. Mamaky ny fepetra izahay, mametraka tehina amin'ny toerana mety ary tsindrio "Manaiky sy mametraka".
Manomboka izao ny utility. Raha hita ny fitaovana, dia tsy ho sarotra loatra ny fametrahana azy, satria ny ankamaroan'ny asa atao dia atao automatique.
Amin'ity fanadihadiana ity dia efa tapitra ity.
Fomba 3: Programa Fahatelo
Amin'ny fampisehoana ny mpampiasa dia tsy ny tranonkala ofisialy ihany no ampiasaina. Azonao atao ihany koa ny mitady mpamily amin'ny loharanom-pahefana hafa, fa tsara indrindra ny mampiasa fandaharan'asa manokana, ny foto-kevitr'izy io dia mitovy amin'ny zavatra atolotr'ireo fitaovana. Ao amin'ny tranokalanay dia afaka mahita lahatsoratra tena tsara izay manantitrantitra ny mendrika ny fampiharana tsara indrindra amin'ity sehatra ity.
Vakio bebe kokoa: Fifantenana rindrambaiko ho an'ny fametrahana mpamily
Vetivety dia azo lazaina fa ny programa tsara indrindra dia DriverPack Solution. Ity no rindrambaiko izay manana tahiry goavana ho an'ny mpamily, ny interface interface sy ny lahasa fototra voafetra, izay manampy ny mpandray anjara tsy "ho very" amin'ny fahaiza-manao. Na dia tsy sarotra loatra aza ny fampiasana an'io fampiharana io, dia ilaina ny mamaky ny torolàlana ampiasaina.
Vakio bebe kokoa: Fanavaozana ny mpamily mampiasa ny DriverPack Solution
Fomba 4: ID Devatra
Ny karatra video rehetra, toy ireo fitaovana rehetra mifandray amin'ny ordinatera, dia manana ny isa manokana misy azy. Izany dia mamela anao hamantatra ny fitaovana ampiasaina ao amin'ny tontolo iainana miasa. Ireo IDs manaraka dia ilaina ho an'ny AMD Radeon HD 7600G:
PCI VEN_1002 & DEV_9908
PCI VEN_1002 & DEV_9918
Ity fomba tsotra ity dia tsotra, tsy mitaky fandaharana programa na zavatra hafa. Ny mpamily dia tsy hita afa-tsy amin'ny laharana etsy ambony. Tsotra tsotra izao fa mbola tsara kokoa ny mamaky ny torolalana ao amin'ny tranokalantsika.
Lesona: Ahoana no hiatrehana ny ID matanjaka?
Fomba 5: Standard Windows Setup Tools
Ho an'ireo mpampiasa tsy tia manangona programa sy toerana fitsidihana hafa, dia azo atao ny mametraka mpamily amin'ny alàlan'ny fitaovana ampiasaina amin'ny Windows. Tsy isalasalana fa io fomba io dia tsy mahomby araka izay azo atao, indrindra raha miresaka momba ny karatra video. Tsy manambara ny mety hisian'ny fitaovana rehetra. Na izany aza, efa misy ny fomba, ary afaka mifankahafantatra bebe kokoa amin'ny tranonkala.
Lesona: Ahoana no fomba fanavaozana ny mpamily mampiasa ny rindrambaiko
Ao anatin'ity fanadihadiana ity dia efa vita avokoa ny fomba fiasan'ny fametrahana ny mpamily ho an'ny AMD Radeon HD 7600G.
https://termotools.com mg.termotools.com © Skype 2019